इन्टरप्राइजमा WordPress को उपयोग गर्ने पक्ष र विपक्षहरू छन्। म वर्डप्रेस अनुभवलाई रेसि raसँग तुलना गर्दछु। तपाईंसँग कार (वर्डप्रेस), ड्राइभर (तपाईंको कर्मचारी), तपाईंको इन्जिन (विषयवस्तु र प्लगइनहरू), र तपाईंको रेसट्र्याक (तपाईंको पूर्वाधार) छ। यदि यी कुनै पनि तत्वहरूमा अभाव छ भने, तपाईंले दौड गुमाउनुभयो। हामीले धेरै ठूला कम्पनीहरू एक WordPress माइग्रेसनका साथ असफल भएको देख्यौं र दोष वर्डप्रेस; यद्यपि हामीले वास्तविक मुद्दा कहिल्यै देखेका छैनौं WordPress.
संसाधनहरूमा पहुँच - अन्य CMS विकास श्रोतहरू खोज्न वास्तविक चुनौती हुन सक्छ, तर WordPress संग तिनीहरू जताततै छन्। चेतावनी: यो पनि समस्या हुन सक्छ ... त्यहाँ धेरै विकासकर्ताहरू र एजेन्सीहरू छन् जुन WordPress भित्र अत्यन्त कमजोर समाधानहरू विकास गर्दछन्।
अनुकूलन - WordPress हो राम्रो बक्स बाहिर जब यो खोज ईन्जिन अनुकूलन को लागी आउँछ, तर यो राम्रो छैन। उनीहरूले हालसालै साइटम्यापहरू उनीहरूमा थपेका छन् Jetpack प्लगइनतर यो यत्तिको बलियो होइन योआस्टको एसईओ प्लगइनहरू.
सुरक्षा - जब तपाईं वेबको २%% लाई शक्ति दिनुहुन्छ, तपाईं ह्याकि forको लागि ठूलो लक्ष्य हुनुहुन्छ। फेरि, व्यवस्थित होस्टिंगले स्वचालित प्लगइन र थिम अपडेट प्रस्ताव गर्दछ जब सुरक्षा मुद्दाहरू खडा हुन्छन्। म अत्यधिक बाल विषयवस्तुहरू निर्माण गर्न सिफारिश गर्दछु ताकि तपाईं आफ्नो समर्थित प्यारेन्ट थीम अपडेट गर्न जारी राख्न सक्नुहुनेछ विषयवस्तुको साथ तपाईंको साइट जोखिममा राख्नबाट बच्न।